miaramila casino gran amin'ny alalan'ny madrid karazan-tsakafo
miaramila casino in gran via de madrid
Kambana Renirano Maneran-tany Holdings niteraka fidiram-bola ny $143.2 m ho an'ny Q2, 29% hampitombo ny taona amin'ny taona harrah's casino kansas city mo.
Lehibe lalao vola miditra nitombo 26% ny $228m, raha ny vola miditra aterineto nihena 15% ny $17.2 m miaramila casino gran amin'ny alalan'ny madrid karazan-tsakafo. Nanitsy EBITDA dia niakatra 7% ny $47.5 m toy ny mpandraharaha nifidy Dover ny Ratsy' anjara amin'ny vondrona, famokarana $25.8 metatra amin'ny ankapobeny ny vondrona vola miditra. Ny mpandraharaha hoy ny fifaninanana vaovao izany niatrika duringthe ampahefatry maintsy lehibe kokoa noho izay nandrasana fiantraikany ratsy eo amin'ny latabatra ny lalao eo amin'ny toerana in Lincoln, Rhode Island casino miaramila ao melilla ny tantara. Amin'ny ankapobeny, ny latabatra lalao vola miditra nihena ny 34% ny $7.6 m, raha slots nihena eo ho eo amin'ny 17% amin'ny $32.2 m.
Vola azo avy amin'ny lalao totalled $100.2 m, ny 22% miaramila casino in gran via de madrid. Nidobodoboka be ny vola miditra nandatsaka 2% ny $3.8 m, trano fandraisam-bahiny ny vola miditra rose 107% ny $11.4 m sy ny sakafo sy zava-pisotro ny vola miditra nitombo 52% ny $18.8 m.
George Papanier, Kambana Renirano Maneran-tany Holdings ny Filoha sy ny filoha TALE jeneralin'ny, nilaza hoe: "Ny fanamafisana ny mifantoka amin'ny tao-tsena sy ny avy-of-tsena accretive fitomboana ihany koa ny manaporofo ny tenany tao amin'ny tany am-boalohany handeha isika mba hitombo hatrany prudently ho multi-state mpandraharaha mipetraka any Rhode Island oharina iray mpandraharaha isam-paritra.".